News Collection: बिहे गर्ने के को हतार !
बिहे गर्ने के को हतार !
लागूऔषध दुर्व्यसन बिरुद्धको चलचित्र 'सिग्नेचर'बाट करिअर सुरु गरेकी सुमिना घिमिरेका अहिलेसम्म सातवटा चलचित्र रिलिज भइसकेका छन्, त्यत्तिकै संख्यामा रिलिजको क्रममा छन्। प्रवेशको तीन वर्षमै दर्जन बढी चलचित्रमा नायिकाको भूमिका पाएकी उनी छोटो सयममै स्थापित हुने 'लक्की' नायिकामध्येमा पर्छिन। यसअघि सम्बन्धका कारण चर्चामा आएकी उनले राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा सहभागी हुन आएका बखत भने 'ब्वाइफ्रेण्ड नभएको' दाबी गरिन्। उनीसँगको कुराकानीः
चलचित्र क्षेत्रका कसरी आउनुभयो?
तीन बर्षअघि अध्ययनको लागि काठमाडौं गएँ। त्यहाँ पुगेपछि अरू काम पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने लागेर नृत्य निर्देशक बसन्त श्रेष्ठकहाँ पुगें। यही क्रममा मैले साइबर संसार डट कमको लागि फोटो सुट गरेकी थिएँ। त्यही फोटो हेरेर निर्देशक ज्ञानेन्द्र देउजाले 'छबिलाल कञ्जुस छैन' फिल्को लागि सोलु नायिकाको रुपमा अफर गर्नुभयो। यहीँबाट मेरो चलचित्र यात्रा सुरू भएको हो।
अहिलेसम्म कुन-कुन चलचित्रमा अभिनय गर्नुभयो?
मैले सुरुमा अभिनय गरेको चलचित्र 'छविलाल कञ्जुस छैन' हो। तर रिलिज भएको चाहिँ दुलही हो। यस अवधिमा मेरा सातवटा चलचित्र रिलिज भइसकेका छन् भने त्यत्तिकै संख्यामा रिलिजको क्रममा छन्। म अहिले अप्रिल फूल र माई ब्रदरको सुटिङमा छु।
दुलहीपछि चलचित्र क्षेत्रबाट सन्यास लिएको हल्ला चल्यो नि?
मलाई फिल्म क्षेत्रमा प्रगति गरेको देख्न नसक्नेहरूले चलाएको हल्ला मात्र हो। दुलहीपछि मेरो ब्याचलरको परीक्षा भएकोले केही समयका लागि बिश्राम लिएकी थिएँ। घरपरिवारको सहयोग छ, भर्खैर क्यारियर बन्दैछ, मैले किन सन्यास लिने?
यति छोटो समयमा सफलता कसरी पाउनु भयो?
पहिलो त मेरो आफ्नै मिहिनेत, संघर्ष र लगाब हो। दोस्रो मेरो घरपरिवारको सहयोग हो। सरकारी स्वास्थ्य निकायमा जागिरे मेरो बुवा (गंगाप्रसाद घिमिरे) मलाई डाक्टर वा नर्स बनोस्, भन्ने चाहनुहुन्थ्यो। तर, मैले फिल्म लाइनको कुरा राख्दा उहाँले सहजै स्वीकार्नुभयो। आमा, दिदी र दाइले पनि मलाई सधैँ सहयोग गर्नुभयो। घरपरिवारबाट सहज बातावरण नपाएको भए म फिल्मक्षेत्रमा हुन्थेन होला।
अहिले चलिरहेको चलचित्र महोत्सवबाट सुर्खेतले के अपेक्षा गर्ने?
महोत्सवले हामी सुर्खेतीको लागि निकै राम्रो गर्छ भन्ने लागेको छ। देशभरका चलचित्रकर्मीको जमघट हुने भएकोले सुर्खेत पनि चलचित्र उद्योगको लागि उर्वरभूमिको रूपमा परिचित हुनेछ। यसले भोलि थुप्रै फिल्महरू यहाँ सुटिङ हुने बातावरण निर्माण हुनेछ। अर्कोतिर यहाँका कला र प्रतिभाले राष्ट्रिय रुपमा प्रवेश पाउनेछन्।
प्रसंग बदलौँ, बिहे कहिले गर्ने?
फिल्म क्षेत्रमा भर्खैर करिअर बन्दैछ, पढाइ पनि सकिएको छैन। अहिले नै हतार छैन। त्यसमाथि दाइ र दिदीले पनि बिहे गर्नुभएको छैन। घरबाट पनि त्यस्तो कुनै दबाब आएको छैन।
प्रेमको चक्कर त चलेको होलो नि?
अहँ, त्यस्तो पनि छैन।
प्रेमपत्र/प्रस्ताव कत्तिको आउँछन्?
फूल भएपछि त्यसमा भमरा बस्नु स्वाभाविकै हो। नत्र फूलको के नै पो महत्व हुन्छ र?
यो क्षेत्रमा नायिकामाथि हरेकखाले शोषण हुन्छ भन्ने सुनिन्छ, तपाईको अनुभव कस्तो छ?
अहिलेसम्मको यात्रामा मैले यस्तो भोग्नु परेको छैन। आफू असल भएपछि कसैले त्यस्तो गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अर्को कुरा फिल्म क्षेत्रमा यस्ताखाले हल्लाहरू निकै चल्छन्। एउटै क्षेत्रमा काम गर्दा एउटै टेबुलमा बसेर खाने, सरसल्लाह गर्ने सामान्य हो, यसैलाई बाहिर नराम्रोसँग प्रचार गरिँदा दुःख लाग्छ।
प्रस्तुतिः कलेन्द्र सेजुवाल